Nyefee faịlụ site na a ekwentị na PC aghọwo-ewu nnọọ ewu na ịrị elu nke mobile na nkà na ụzụ kọmputa. Chọta ezi mpempe software na-ekwe nkwa gị kwesịrị ekwesị faịlụ transfer nwere ike ịbụ a bit tricky ekele a dịgasị iche iche nke ngwaahịa dị na ahịa taa. Na nkenke, ihe ịma aka na-abịa mgbe achọ àgwà na isiokwu a anya iji lie ihe mgbagwoju anya. Anyị na-anatomical echiche nke 6 ngwaọrụ na-eguzo n'etiti ndị ọzọ nọ n'ógbè nke iPhone-PC faịlụ nyefe.
Wondershare TunesGo Ochie bụ ngwá ọrụ na boosts on oké ụdịdị na niile atụmatụ malite na ọrụ ahụmahụ. The software e mere ka ọrụ na-enweta ike iru ala na faịlụ nyefe. The mma ihe bụ na ị na mkpa ụfọdụ dị mfe nzọụkwụ iji nweta faịlụ nyefe. The software ahapụ iPhone ọrụ bupu kọntaktị, foto, na ndị ọzọ na faịlụ ghara ikwu eziokwu na ngwá ọrụ na-enye ohere a onye ọrụ na-ndokwa faịlụ dị ka photos, music, na kọntaktị n'etiti ndị ọzọ. Ị nwere ike ibudata software si Download buttons n'okpuru.
Wụnye na nkwụnye ekwentị gị site na iji eriri ụdọ-faịlụ na ekwentị gị ga-scanned na ndokwa maka gị ka mfe ịnyagharịa site na-ahọrọ ọ bụla ọrụ ị chọrọ. Ị nwere ike ịhọrọ faịlụ chọrọ nyefee si sidebar na pịa Export. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga enyere gị aka inwe ọrụ ahụ. Ị nwere ike pịa ebe a na-agụ ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ngwá ọrụ na dị mfe na-agbalị bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla nke àgwà ya anya na-enye.
2. Xilisoft iPhone Nyefee
Ngwá ọrụ a iji nyere ndị na ọrụ mekọrịta ha iPhones na PC ebe-ekwe ka faịlụ management. The software na-enye ohere a onye ọrụ iji nweta ya ma ọ bụ ya iPhone dị ka a na-ebugharị ebugharị mpụga disk N'ihi ya easing faịlụ ohere-site na iji a faịlụ Explorer. Bee ogologo akụkọ mkpụmkpụ, software bụ reputable maka inye a ụzọ dị mfe iji ndabere faịlụ, na kọntaktị na ozi ebe nkwado mmekọrịta na ndị ọzọ dị mkpa ngwa dị ka iTunes.
Iji nke a software, i kwesịrị budata ma wụnye ya mbụ si http://www.xilisoft.com/iphone-transfer.html. Mgbe echichi, ẹkedori ngwá ọrụ na jikọọ ekwentị gị site na iji eriri USB na software. The software ga-akpaghị aka ịchọpụta na ike iṅomi ngwaọrụ. Mgbe scanning, gị faịlụ ga-mere ndokwa na edemede na ekpe sidebar nke interface.
Ị nwere ike họrọ bụla faịlụ na ị chọrọ nyefee gị PC na pịa Iji Computer
Syncios a mara maka faịlụ nyefe si PC ka IPhone ma ọ bụ ugbu a àjà faịlụ nyefe si iPhone ka PC. Ọ bụ ihe na IOS Manager nke karịrị echiche na multimedia ọdịnaya mmekọrịta na exporting ọdịnaya maka nkwado ndabere na mpaghara maka ojiji na a PC. Ọ bụ ihe dị mfe iji wụnye ngwá ọrụ n'ikike nke a ịkwa akwa mere ọkachamara ụgbọala ihe maka gị! Otu mfe iji ma ọ bụ kama enyi na enyi onye ọrụ interface na-eme ka ihe nnọọ mfe karị mgbe ebufe faịlụ n'etiti PC na ekwentị. Iji nke a software, download na nwụnye ya si http://www.syncios.com/. Mgbe wụnye, jikọọ iPhone na iji eriri USB na-a USB ọdụ ụgbọ mmiri dị PC-dị ka ndị ọzọ na ngwaọrụ kwuru, software ndokwa faịlụ na ekpe ngalaba nke interface. Dị nnọọ bulie ndị mkpa ka ị nyefee na pịa Export.
Ngwá ọrụ a bụ otu ndị ọzọ na ọrụ nke ọma na transfer na mmekọrịta na iTunes. The ngwá ọrụ na-enye ohere a Dọrọ na dobe obibia na faịlụ nyefe na iTunes na PC mbanye. Ọ na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ ekwentị ị ikwunye n'ime gị PC-eme ka ọ enweghị nkebi n'ihi na ọrụ ịnweta ha ọdịnaya ekwentị. Jikọọ ekwentị gị na PC na họrọ ọdịnaya na-ịchọrọ ị nyefee si ekpe sidebar.
Nke a software bụkwa mma na ijikwa music ọbá akwụkwọ n'echiche bụ na ọ nwere ike ka ị na-eme ndokwa music faịlụ na wughachi listi ọkpụkpọ.
5. Ịtụnanya iPhone Nyefee
Nke a bụ software na-anapụta completer iOS management ngwọta na-ọrụ. The ngwá ọrụ agbam ume àgwà na egosipụta-ọ na-akwado a ọtụtụ nke faịlụ transfer ọ ga-abụ multimedia na akwụkwọ faịlụ. Ya egosipụta ọtụtụ gbatịrị n'ihu n'ime ndakọrịta mpaghara. The software akwado nta ka ọ bụla iPhone ngwaọrụ. The interface bụ uru na-ekwu banyere nakwa na software na-etu ọnụ a ezi ọrụ interface n'asụsụ anọ ona ọrụ. Na-eji software, download a version na suut gị site http://www.amazing-share.com/iphone-transfer.html.
Leawo ndidi n'etiti ndị kasị mma software na-emepụta na ụwa na nke a bụ ezi ihe nlereanya nke a ezigbo ngwá ọrụ maka iphone ka PC faịlụ nyefe. Ọ bụ ihe zuru ezu ngwugwu na anya aka transfer ọ bụla Apple ngwaọrụ gbakwunyere ikwe ndabere nke iPhone faịlụ. The software bụ ahụkebe na syncing gị iPhone na iTunes, ijikwa faịlụ iwelata mbiputegharị na a nnọọ ngwa ngwa na-adaba adaba n'ụzọ. Na-eji software, download na wụnye si www.leawo.org. Ọ chọrọ iTunes arụnyere pụtara na ị ga-mkpa ka ha arụnyere mbụ. Jikọọ gị iPhone gị PC ..
Ego iji họrọ faịlụ ọdịnaya na idetuo ndị ị ga-achọ iji chekwaa ma pịa
-Esonụ na tebụl na-enye a n'akụkụ-na-n'akụkụ nyochaa nke ngwá ọrụ nkọwa:
Na-akwado: iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 6, iOS 5 wdg
na-agba na Windows na Mac
enyefe: Documents, Videos, Music, audiobooks, Photos, Pọdkastị wdg
akpaghị aka idozi & ebuli song ọmụma
Mfe iji wụnye na Iji
Xilisoft iPhone Nyefee
Na-akwado iPhones / iPad / iPod
Na-enye ohere Export na Management nke Music, Photos, Videos na Akwụkwọ
Na-akwado: iPhones / iPad / iPod
enyefe: Music, videos, foto, ngwa, eBooks, kọntaktị, ozi
Na-akwado: Windows na Mac OS
Na-enyefe: Music, videos, foto, ngwa, ozi, kalenda, wdg
Ịtụnanya iPhone Nyefee Ngwá Ọrụ
Na-enyefe: music, nkiri, foto, iTunes U, Podcast, Igwefoto Roll, SMS, Ndi ana-akpo, mgbanaka-aj u, olu memos
Na-enyefe: music, fim ,, ụdaolu, photos TV na-egosi, ngwa ọdịnala na Igwefoto Roll faịlụ
Na-akwado: iPhone / iPod / iPad
> Resource> iPhone> Top 6 ngwaọrụ nyefee faịlụ site na iPhone ka PC